9 Shirkadaha ugu Fiican ee Cuntada ee Talyaaniga ee Her Pasta Fanatic
Mareykanka Illinois Chicago
Waxaad ka heli doontaa makhaayado badan oo Talyaani ah oo ku yaal Chicago oo ka badan busteeraha ama dogob kulul ee kulul - taasina waa mid cajiib ah. Laga soo bilaabo xaafadda North Side ee Andersonville ee loo yaqaan ' West Loop' , Tartanka gobolka ee Talyaanigu wuxuu ka helaa jacayl ka badan kan kale ee jimicsiga magaalada.
Waxaan horey u soo jeedinay baasaska ugu fiican ee loogu talagalay pizza ee Chicago , sidaa daraadeed shirkadahan aadka u wanaagsan waxay yihiin barbaro weyn oo ah baastada, suugada, liisaska khamriga iyo waxyaabo kale oo badan. Iyada oo aad u badan oo weyn - iyo heer caalami ah mararka qaar - dhibco oo dhan magaalada, doorasho ayaa laga yaabaa inay xoog badan. Go'aankaaga ayaa waxoogaa sahlaya adoo dooranaya makhaayadaha 10ka ee ugu jecel talyaaniga ee Chicago.
Anteprima waxay dareemeysaa inay xaq u leedahay guriga Andersonville . Waxay u muuqataa inay dib u dhigtay xaafaddeeda, qiimahaasuna waxay ka tarjumayaan xaddigaas. Waxaa jira saddex-maalin koorso oo maalinle ah, oo ah tusaaleyaal sir ah oo loo yaqaan 'Prix-fixe menu' oo ah $ 29 oo soo bandhigay qof daacad ah. Cuntada xilliyeed waxay isbeddeshaa toddobaadlaha, iyo daaqsiyada sida gnocchi, orecchiette, iyo ravioli ayaa dhamaantood lagu sameeyaa gudaha. Guryaha qurxoon ee qurxinta quruxda badani waxay dareensanyihiin inay marti-geliyaan sidii ay u cuni lahaayeen guriga xagaaga.
Waxa Lagu Cabbirayo: Liiska dhammaan khamriga Talyaaniga waxaa ka mid ah caddaan, dhalaalaya, binkooyin iyo casaan. Waxaa jira 19 ikhtiyaar oo ay ku jiraan muraayadda.
Gobolka (S) Waxay soo celisaa: Meelo badan oo ka tirsan gobolka waqooyiga Talyaaniga
Saacadaha: 5: 30-9: 30 galabnimo Isniinta illaa Khamiista; 5: 30-10: 30 galabnimo Jimce; 5-10: 30 galabnimo Sabtida; 5-9 galabnimo Axadda
Cinwaanka: 5316 N. Clark St., 773-506-9990
Ku dhawaad Guriyeynta: Guriga 5863 Chicago Bed and Breakfast
Kaliya shan ilaa 10 daqiiqo oo koonfur galbeed ah oo ku taala wadada Wadnaha ee Talyaaniga, Bruna waxay ku dhowdahay ilaa 1933, taasoo ka dhigaysa makhaayadda saddexaad ee ugu wayn talyaaniga ee Chicago. Qaar badan oo ka mid ah cuntooyinka rasmiga ah / hilibka ee Bruna Cani ayaa ah mid ciladeysan, gudaha gudaha waxay ku jirtaa racfaankii hore ee Talyaaniga. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ka kala duwan yihiin Bralopia duufaanta ah - kaas oo la yimaada jilicsanaanta dhirta ah ee dufanka - iyada oo si qarsoodi ah loo ogaanayo hilibka lakabaaxa leh, iyo dhadhanka linguine iyo broccoli.
Waxa Lagu Cabbirayo : Bruna waxay soo bandhigaysaa qurub qurux badan oo qadarin leh oo khamriga caloosha iyo talyaaniga ah ee dhalada iyo dhalada.
Gobolka (S) Waxay soo celisaa: Tuscany
Saacadaha: 11 subaxnimo-10 galabnimo Isniinta illaa Khamiista; 11 subaxnimo illaa 11 galabnimo Jimce, Sabtida; 1-10 galabnimo Axad
Cinwaanka: 2424 S. S. Oakley Ave., 773-254-5550
Deganaanshaha Guriga: Soho House
Coco Pazzo ayaa u dabaal-dagaya 25-sano ee sannadka 2017-ka, waxaana jira sabab wanaagsan oo loogu talo-galay Wabiga Waqooyi maraakiibta ayaa loo tixgeliyaa inay tahay horjooge goobta degaanka. Waxaa lagu dhajiyay adoo ku soo bandhigaya Chicago in ay u socoto casriga casciga casriga ah , waxayna sii socotaa in ay sii socoto sanadaha oo dhan. Waxaa jira risaaqo maalinta, taas oo si gaar ah u xiiso leh, oo lagu daray hilibka xabuubka guriga iyo hilibka Tuscan ee hilibka laga buuxiyo. Cunto cunista Coco Pazzo Cafiska wuxuu ku yaallaa meel aan ka fogayn Streeterville.
Waxa Lagu Cabbirayo : Coco Pazzo waxay leedahay liistada khamriga oo dhan ah oo leh Talyaani leh in ka badan 20 oo ay ku jirto muraayadda.
Saacadaha: 5-10 galabnimo Isniinta ilaa Khamiista; 5-10: 30 galabnimo Jimce, Sabtida; 5-9: 30 galabnimo Axadda; 11:30 subaxnimo-2:30 galabnimo Isniinta ilaa Jimcaha
Cinwaanka: 300 W. Hubbard St., 312-836-0900
Isku-xirnaanta Guriga: Conrad Chicago , Gwen
Just shy oo ka mid ah West Loop ee River West, La Scarola waa waqti dheer jimicsi soo jiidata sida likaha Johnny Depp, Vince Vaughn, iyo Nicolas Cage. Waxaad ka hubin kartaa darbiyada sawirrada A-Listers oo ay la socdaan milkiilaha / hilibka Armando Vasquez. Cunnadu waa madadaalo, madadaalo iyo deeqsi leh suxuunta saxda ah sida isweydaarsiga Armani (gawaarida la dubay oo la gashadey casaan, digir qarsoodi ah oo qarsoodi ah oo baradho ah) iyo parmigiana eggplant.
Waxa Lagu Cabbirayo: Tobankii khamri oo ay ku jiraan muraayadda waxaa ka mid ah xulashooyinka Talyaaniga iyo Maraykanka; bixinta quraaradaha quraaraduhu waa mid aad u ballaadhan.
Gobolka (S) Waxay Soo Saareysaa: Sicil
Saacadaha: 5-11 galabnimo Isniinta ilaa Jimcaha; 4-11 galabnimo Sabtida; 4-10 galabnimo Axadda
Cinwaanka: 721 W. Grand Ave., 312-243-1740
Ku dhawaad ​​Guriyeynta: Acme Hotel Co., Hotel Freehand , James Chicago
Goobaha ugu fiican ee guriga ku yaala ee ku yaala West Loop Monteverde waxay ku yaalaan bar. Taasi waa halka ay martidu ay daawan karaan shaqaalahyadu inay si fiican u fuushaan baasto qaab muuqaal ahaan u sameysan. Taasi waxay u dhexeysaa qaababka qaab-qaabeynta qaab-dhismeedka fusilli-qaabka loo yaqaan 'fusilli'. Sarah Grueneberg oo ah madaxa iskaashiga fulinta - oo horey u ahaan jiray macmudka fulinta ee makhaayadda Spiaggia oo abaalmarin ah - wuxuu sameeyey magaca naftiisa isagoo soo galay kaalinta labaad ee Top Chef sanadkii 2011.
Waxa Lagu Cabbirayo: Monteverde waxa ay liis gareysiisay liis la yiraahdo Vino talyaani, oo lagu daray farsamooyinka farsamada qaloocsan ee dhinaca naadiga ah - iyada oo tilmaan talyaani ah. Ka feker Arancia spritz, Sicilian Sunrise ama Black Manhattan oo leh furfur ah Nardini grappa.
Gobolka (S) Waxay Soo Celisaa: Dhamaan Talyaaniga
Saacadaha: 5-11 galabnimo Talaadada ilaa Sabtida; 4-9 galabnimo Axadda
Cinwaanka: 1020 W. Madison St., 312-888-3041
Nico Osteria, oo ka soo jeeda Talyaaniga, oo ka soo jeeda qoob ka ciyaara Paulhahan iyo kooxda kooxdiisa One Hospital Hospital, waxay ku taalaa heerka ugu horeysa ee Thompson Chicago Hotel . Kooxda makhaayadda ayaa ka danbeeya xiddigaha caanka ah sida Blackbird, Publican iyo Saacadda Violet waxay keeneysaa goobta ugu horeysa ee ku taala Gold Coast iyo calaamadaha guriga lagu sameeyey, maaddooyinka xilliga caadiga ah, iyo caanaha. Qalabka booska rustic ah 108 qolal gudaha ku yaal, oo leh meel bannaan oo bannaan oo bannaanka ah oo lagu fadhiisto gawaarida lugta.
Waxa Lagu Cabbirayo: Waxaa jira Amar on menu, iyo waliba liistada isbeddelka ee isbeddelka yaryar iyo kuwa beertiisa. Liistada khamriga ee dhamaystiran waa dhamaan Talyaaniga waxayna bixisaa sharrax faahfaahsan oo ku saabsan gobol kasta.
Gobolka (S) Waxay soo celisaa: Dhowr
Saacadaha: 9 subaxnimo-10 galabnimo Axadda; 7:30 subaxnimo - 10 galabnimo Isniinta ilaa Khamiista; 7:30 subaxnimo - 11 galabnimo Jimce; 9 subaxnimo-11 galabnimo Sabtida
Cinwaanka: 1015 N. Rush St., 312-994-7100
Ku dhawaad ​​Aaladaha : Sofitel Chicago Water Tower, Thompson Chicago Hotel
Ku yaalla meel cagaaran oo kuleyl ah iyo meel loo cabbo oo ku beegan Logan Square , Osteria Langhe wuxuu diiradda saaraa cuntada ka jirta gobolka Piemonte. Qoraalka gaarka ah waa biin, maqaayada saxeexa makhaayadda, taas oo ah ravioli-gacanta oo si fudud u xiran ee parmesan, saari, iyo subag. Osteria Langhe waxay ka kooban tahay dhawr qaybood oo ka hooseysa Rosa's Lounge, mid ka mid ah boodhadhada ugu weyn Chicago .
Waxa Lagu Cabbirayo: Martidu waxay dalban karaan sadexda hablood ee saldhigga talyaaniga ee Negroni (hab dhaqameed, ama saraan soodhada soodhaha leh ama khamri dhalaalaya), iyo sidoo kale martigaliyaha cabitaanka caadiga ah iyo asalka. Liistada khamriga waa boqolkiiba 95 tayada talyaaniga.
Gobolka (S) Waxay soo celisaa: Piemonte
Saacadaha: 5: 30-9 galabnimo Axadda; 5: 30-10 galabnimo Isniinta illaa Khamiista; 5: 30-11 galabnimo Jimce, Sabtida
Cinwaanka: 2824 W. Armitage Ave, 773-661-1582
Deganaanshaha Guriga: Longman & Eagle Inn
Pelago ayaa saxda u ah Magnificent Mile , oo waxay u egtahay nooca cuntooyinka talyaaniga ee aad ka heli lahayd New York ee Upper East Side. Waxay ka timid Michelin star Mauro Mafrici oo ku takhasusay cayayaanka guriga, risotto iyo cuntooyinka badda. Cuntada ayaa sidoo kale si fiican loo helaa, waxaana laga sameeyaa hen, dufan, iyo qamri. Makhaayadda waxay ku taalaa heerka koowaad ee Raffaello Hotel .
Maxaa Lagu Cabbirayo: Liiska inta badan khamriga Talyaaniga waxaa lagu muujiyay Pelago.
Gobolka (S) Waxay soo celisaa: Waqooyiga iyo Koonfurta Talyaaniga
Cinwaanka: 201 E. Delaware Pl., 312-280-0700
Sawir sawir ah ee Spiaggia
Spiaggia waxay dajisaa heerka caadiga ah ee kubadda Talyaaniga ee Chicago. Waxaa la siiyaa xiddiga Michelin sanad walba tan iyo 2011, iyo abaalmarinta James Beard abaalmarinnada kale. Ninka / lammaanaha Tony Mantuano waa ninka ka danbeeya sixirka, isagoo ka soo kabanaya cuntada dalkiisa hooyo. Wuxuu sidoo kale ku rusheeyaa cuntooyinka asalka ah ee ayeeyadiis. Sanadihii ugu danbeeyay, Spiaggia waxay dejisay xayndaabka dharka (jackets aan loo baahnayn) iyo menu; Hadda waxaa jira nooc casri ah oo ka mid ah casharka Talyaaniga ee caadiga ah ee Axaddii kaasoo u adeegay qaabka qoyska. Waa $ 40 qofkiiba. Cafe Spiaggia waxay ku taalaa albaabka xiga ee makhaayadda.
Waxa Lagu Cabbirayo: Makhaayadda Salaantu waxay ka kooban tahay tiro Talyaani ah oo la isku qurxiyey, asal ahaan asal ahaan sida Mantuano of tequila, qoryaha loo yaqaan "grapefruit-infused aperol", Lillet Blanc iyo Prosecco. Waxaa jira seddex sarkaal iyo agaasin cabitaan oo kormeeraya barnaamijka Spiaggia, oo ah mid aad u sarreeya, barnaamijka khamri iyo abaal-marinta.
Saacadaha: 11:30 subaxnimo-2: 30galabnimo, 5: 30-10: 30 galabnimo Isniinta illaa Sabtida; 4-8 galabnimo Axadda
Cinwaanka: 980 N. Michigan Ave., 312-280-2750
Guryaha u dhow: Hudheelada aagga .
Sidee u dhaqmaan sida dalxiis ee Chicago
Adler Planetarium iyo Museum Astronomy
The Big Chicago 10: Tilmaamaha Daaweynta Qaboobaha ee Qaboobaha
Ka eeg Chicagoland Laga soo bilaabo Perch ee Skydeck Willis Tower
Woqooyiga Chicago iyo Wargeysyada Bulshada
Keeno Letters Customs Long Long US Cards oo leh Kaarka Gelitaanka Global
Riviera ee Crisings Oceania
Waxyaabaha Bilaashka ah ee Lagu Shaqeeyo ee Montreal - Fikirka Bilaashka ah ee Montreal
Jaamacadda Oklahoma State University Cowboys Football
Saldhigga Maalinta Hooyada ee Salt Lake City
Macluumaadka Madaarka Mumbai
Top 10 Waxyaabaha Ku Saabsan Dresden
Waddooyinka Sare ee Suuqa (Joogta ah) ee Paris
Thrift Stores ee Reno iyo Sparks Nevada
Talooyin ku Saabsan Kaydinta Loogu Talagalay booqashada Banff National Park
Soojiidashada taageerayaasha Anime iyo Manga ee Japan
Cunto-qadar-dambiyeedka Dalxiiska San Antonio